OIC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည် သွားမည် | ဧရာဝတီ
OIC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မြန်မာပြည် သွားမည်
ဧရာဝတီ| December 19, 2012 | Hits:351
| | အစ္စလမ်မစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ Ekmeleddin Ihsanoglu သည် မကြာမီ မြန်မာနုိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။ OIC အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ ပါဝင်သော အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူများ ၏ ယခု ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မွတ်စလင်များ တိုက်ခိုက်ခံရမှု ရပ်ဆိုင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သော ခရီးစဉ် ဖြစ်ကြောင်း ပါမောက္ခ Ekmeleddin Ihsanoglu က ယမန်နေ့တွင် ပြောကြားသည်ဟု Arab News သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ အတွင်းကလည်း OICကိုယ်စားလှယ် Mr. Ufuk Gokcen မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သေးသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> swe htwe December 19, 2012 - 5:49 pm	We don’t believe in OIC. If they have goodwill,they should accept these bengalis to live in their countries. It is win-win situation and we will be very grateful. They are immigrants and they should go back to origin country. OIC must prevent the breach of human rights in their countries first.
Reply	ဗမာ December 19, 2012 - 9:35 pm	Get lost OIC. Myanmar is not Islamis country.
Reply	kyaw December 19, 2012 - 11:24 pm	they should not come to myanmar cause they support for only bangali or lie rohingha..bring to rubish to our land again,,,,